साताको अन्तिम दिन तोलामा ९०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मुल्य - सिम्रिक खबर
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रवार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । स्थानिय बजारमा शुक्रवार सुनको भाउ रू. ९०० ले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रवार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ८५ हजार ६०० मा कारोबार भएको छ । बिहीवार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रू. ८६ हजार ५०० मा कारोबार भएको थियो । बिहीवारको तुलनामा शुक्रवार छापावाला सुन प्रतितोला रू. ९०० ले घटेको हो ।
त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला रू. ८५ हजार १५० मा कारोबार भएको छ । बिहीवार तेजाबी सुन प्रतितोला रू. ८६ हजार ०५० मा कारोबार भएको थियो । यस्तै, शुक्रवार चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । बिहीवार प्रतितोला रू. एक हजार २८५ मा कारोबार भएको चाँदी शुक्रवार प्रतितोला रू. एक हजार २५० खरीदविक्री भइरहेको छ । बिहीवारको तुलनामा शुक्रवार चाँदी रू. ३५ ले घटेको हो ।